Kubafundi nabazali Kubazali & Ootitshala
by UBlythe Grossberg
Izikolo ezizimeleyo zinokubonakala zingekho kwiintsapho ezininzi. Amakhaya akwizinga eliphakathi kwamadolophu amaninzi ase-US anzima neendleko zempilo, imfundo kunye nezinye iindleko ezikhulayo. Ukuhlawula ngokulula ubomi bemihla ngemihla kunokuba ngumngeni, kwaye ezininzi iintsapho eziphakathi kwamacandelo aziqwalaselanga nokukhetha ukusebenzisa esikolweni sabucala ngenxa yeendleko ezongeziweyo. Kodwa, imfundo yesikolo yangasese ingaba lula ukuyifumanisa kunokuba bacinga.
Njani? Hlola ezi ngcebiso.
Icebo # 1: Faka isicelo seNcediso yeMali
Iintsapho ezingenakukwazi ukufumana iindleko ezipheleleyo zezikolo ezizimeleyo zingenza isicelo sezemali. Ngokwe-National Association of Schools Independent (NAIS), kunyaka wama-2015-2016, malunga ne-24% yabafundi kwizikolo ezizimeleyo bafumana uncedo lwemali. Lelo nani liphezulu nakwizikolo zokuhamba, kunye nama-37% abafundi abafumana inkxaso-mali. Phantse zonke izikolo zinikeza uncedo lwezemali, kwaye izikolo ezininzi zenzelwe ukudibanisa i-100% yentsapho yabonisa isidingo.
Xa becela uncedo, iintsapho ziya kuzalisa oko kwaziwa ngokuba yiNkcazo yeMali yabazali (PFS). Oku kwenziwa ngeSikole kunye neeNkonzo zabafundi (SSS) yi-NAIS. I-SSS isebenzisa ulwazi olunikezelayo ukuvelisa ingxelo eqikelele imali onokufaka isandla kumava esikolweni, kwaye ingxelo yiyo izikolo ezisebenzisayo ukubonisa imfuno yakho ebonisiweyo.
Izikolo ziyahluka ngokumalunga nokuba zininzi kangakanani uncedo abanokukubonelela ukukunceda ukuhlawula isikolo esikolweni sabucala; ezinye izikolo ezineendawo ezinkulu zinokubonelela ngamaphakheji amakhulu, kwaye ziqwalasela nabanye abantwana obhalise kwimfundo yabucala. Nangona iintsapho zingenakwazi ngokukhawuleza ukuba uncedo olubonelelwe zizikolo zazo luya kuhlawula iindleko zabo, akuze kube buhlungu ukucela nokufaka isicelo sokuncedisa imali ukuze ubone ukuba zeziphi izikolo eziza kubakho.
Uncedo lwezezimali lunokukwenza ukuba izikolo ezizimeleyo zifumaneke kakhulu. Amanye amaphakheji ancedayo ngemali anokuncedisa ekuhambeni, ukuba usebenzisa isicelo esikolweni esikolweni, kunye nokubonelelwa kwezikolo kunye nemisebenzi.
Icebiso # 2: Cinga izikolo ezizizikolo neeZikolo ezibonelela ngeeScholarship ezipheleleyo
Yikholelwa okanye akunjalo, kungekhona zonke izikolo ezizimeleyo ziphethe imali yokufunda. Eqinisweni, kukho izikolo ezingenazo izikolo ezingenasifundo kwilizwe lonke, kwakunye nezikolo ezinikezela ngeengxowa-mali ezipheleleyo kwiintsapho ezifumana umvuzo wekhaya phantsi kwezinga elithile. Izikolo ezikhululekile, ezifana neRegis High School, isikolo sama-boyit school esikolweni saseNew York, kunye nezikolo ezinikezela ngeengxowa-mali ezifanelekileyo kwiintsapho ezifanelekileyo, ezifana ne-Phillips Exeter, zinokukunceda ukuya esikolweni esizimeleyo ngokwenene kwiintsapho ezazingakholelwa iya kuba nexabiso.
Icebo # 3: Cinga izikolo eziphantsi kweendleko
Izikolo ezininzi ezizimeleyo zinezifundo ezincinane kunezikolo ezizimeleyo ezizimeleyo, ezenza ukuba izikolo ezizimeleyo zifikeleleke. Ngokomzekelo, i- Cristo Rey Network yee-24 zamaKatolika kumaziko angama-17 kwaye iSithili sase-Columbia sinikeza imfundo ye-college-prep kwiindleko ezantsi kunezo zikolo ezininzi zamaKatolika. Izikolo ezininzi zamaKatolika kunye nezikolo ezihamba phambili zifumana izifundo eziphantsi kunezinye izikolo ezizimeleyo.
Ukongezelela, kukho ezinye izikolo zokubhoda kwilizwe lonke elinamazinga aphantsi okufundela. Ezi zikolo zenza isikolo sabucala, kwaye nokuba isikolo esikolweni, kulula ukuba iintsapho eziphakathi.
Icebo # 4: Yenza umsebenzi (kwisikolo sabucala)
Inzuzo encinane eyaziwayo yokusebenza esikolweni sabucala kukuba i-faculty kunye nabasebenzi ngokuqhelekileyo banokuthumela abantwana babo esikolweni ngenani elincitshisiweyo, inkonzo eyaziwa ngokuba yi-remission remission. Kwaye nakwezinye izikolo, ukuxolelwa kwezifundo kuthiwa inxalenye yeendleko zigqityiwe, ngelixa kwezinye, iipesenti ezili-100 zeendleko zifakwe. Ngoku, ngokwemvelo, eli qhinga lifuna ukuba kube nomsebenzi wokuvula kwaye ukuba ube ngumqeqeshi ophezulu oqeshwe, kodwa kunokwenzeka. Gcinani engqondweni, nokuba ukufundisa akuwona umsebenzi kuphela kwizikolo ezizimeleyo. Ukususela kwiofisi yezoshishino kunye nokuxhaswa kweengxowa-mali ukufakwa / ukuqeshwa kunye nokulawulwa kwedatha, ukuthengiswa kunye nophuhliso lweekhompyutha, uluhlu olubanzi lwezikhundla ezibonelelwa kwizikolo ezizimeleyo linokumangalisa.
Ngoko ke, ukuba uyazi ukuba izakhono zakho zihambelana neemfuno zesikolo sabucala kwaye ufuna ukuthumela abantwana bakho apho, unokucinga ngokuthungca uthuli lwakho kunye nokufaka isicelo kwisikolo sabucala .
Ukuhlaziywa nguStacy Jagodowski
Ukuhlawula iziThumo zeSikolo soBucala
Imibuzo yabazali: Inxalenye ebalulekileyo yesicelo
Indlela entsha yeNkqubo yabaphathi beNtloko
I-Financial Aid Calculator: Ziziphi iZikolo ezizimeleyo eziQinisekisa ngoncedo?
Iingcebiso ezi-5 zokubhala i-Letter esebenzayo yeTeyile
Yintoni Eyenza Umfundisi Olungileyo?
7 Izilwanyana Eziphula Imithetho Yenzululwazi
Izikolo ezili-15 ezidlulileyo zeBhodi eMelika
IYunivesithi yaseMontgates Admissions
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngo-H kunye nami
Umyalezo womyalezo wesisindo: Musa ukuthumela kwakhona
Iingxaki zeRbbit ye-Massive Feral Rabbit
Sonnet 18 - Isikhokelo soFundo
Yisiphi i-Federal Reserve System?
I-Suffolk University Admissions
Ukubanjelwa kwe "Jeter" ngesiFrentshi
Ndi kholelwe! Umsebenzi wokuBhala wokuThuthukisa
Izixhobo zokuLawulwa kweziMlilo ezisisiseko ezisetyenziswe ngabasemagodini base-Wildland
USujanjan Stevens - iProfayili yoMculi
Ukuqonda Uthando olungenanto
Ukulwela iNgqobhoko: Ndiya kucela nini, Ndifanele Ndiyenze nini?
IMolekyuli kunye neMoles